आफ्नो पहिरनलाई ख्याल गर्न नसक्दा के भयो नेपाली नायिकाहरुको (भिडियो सहित) « Sajha Page
आफ्नो पहिरनलाई ख्याल गर्न नसक्दा के भयो नेपाली नायिकाहरुको (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, १५ कार्तिक | कलाकारले के बोल्छ, के खान्छ, कहाँ जान्छ, के लाउँछ जस्ता सानातिना कुरामा आम मानिसले निकै चासो राख्छन् । कहिले असावधानी त कहिले यत्तिकै बिना कारण उनीहरु विवादमा मुछिन्छन् । कसैलाई त्यस्ता विवादित कुराले सामान्य असर गर्छ भने कसैलाई अप्ठ्यारो नै पार्छ । यस्तै विवादमा तानिएका केही नेपाली नायिकाका तस्वीरहरु जसले उनीहरु मालफंशनको शिकार भएका छन् । मालफंशनमा परेका महिला कलाकारहरुमा करिष्मा मानन्धर, शिल्पा पोख्रेल, प्रियंका कार्की, शुष्मा कार्की लगायतका अभिनेत्रीहरुको नाम आउँछ ।
बोल्ड र बिन्दास नायिकाको छवि बनाएकी सुष्मा कार्की लोकप्रियताका आधारमा चर्चित छिन्। कार्की दर्शकमाझ सेक्सी नायीकाको रुपमा परिचित छिन्। उनका पोस्टमा तस्विर र भिडियो पनि देख्न पाइन्छकार्यक्रम प्रस्तोता, मोडल हुँदे चलचित्र जगतमा छिरेकी कार्कीले मेरो एउटा साथी छ बाट डेब्यु गरेकी थिइन् । उनको भविष्यमा राम्रो गृहिणी र चलचित्र निर्माता बन्ने रहर छ। हेर्नुहोस को को परे त यसमा –
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडालाई न्युयोर्कको पार्क मै यस्तो गरे पछी ! (रियल भिडियो लिक)
उक्त फोटोको रियल भिडियो पनि अहिले लिक भएको छ। हेर्नुहोस :
बंगलादेशको बारेमा यी ७ कुराहरु थाहा पाउदा तपाइँ हैरान हुनुहुनेछ ! (फोटो सहित)
एजेन्सी । बंगलादेश पहिले भारतको एउटा भाग थियो । तर सन् १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि बंगलादेश पाकिस्तानसँग गाभिन पुग्यो र सन् १९७१ मा बंगलामुक्ति संग्रामपछि भारतको सैन्य शक्तिको मद्दतले एउटा अलग राज्यमा परिणत भयो । त्यस्तै आज हामी तपाईलाई बंगलादेशको बारेमा सात रोचक तथ्यहरुको बारेमा जानकारी गराउँछौं ।
१. बंगलादेशमा संसारको सबैभन्दा ठूलो वेश्यालय रहेको छ । वेश्यावृत्तिलाई कानुनी मान्यता प्राप्त भएकाले यहाँ खुलेआम देहव्यापार हुने गरेको छ । आफ्नै परिवारका सदस्यले नै आफ्ना घरका छोरी पैसाका लागि बेच्ने गर्छन् ।
२. बंगलादेशको झन्डामा दुई रङको प्रयोग भएको छ । हरियो रङले खुसी र प्रगतिलाई संकेत गर्छ भने रातो रङले बंगलादेश मुक्तिका क्रममा रगत बगाएका वीर सेनाहरुलाई श्रद्धाञ्जली दिएको हो ।
३. युनिसेफले बताए अनुसार संसारमा नाइजेरियापछि सबैभन्दा बढि बालविवाह हुने देश बंगलादेश हो । यहाँ कम उमेरकी केटीलाई बुढो उमेरको केटासँग विवाह गरिने चलन छ ।
४. सानो देश भएर पनि बंगलादेशको जनसंख्या धेरै हुनेमा विश्वभरको आठौँ स्थानमा पर्छ ।
५. यो देशमा परिक्षाको समय अरुको नक्कल गर्नेलाई जेलको सजाय दिइन्छ । नक्कल गर्नुलाई यहाँ ठूलो अपराध मानिन्छ ।
६. यस देशमा पुरुष र महिलाले हात मिलाउन प्रतिबन्ध लगाइएकोले पुरुषहरु महिलालाई सम्मान गर्नुपर्दा एउटा हात छातीमा राखेर शिर निहुराउँछन् ।
७. बंगलादेशमा राति १० बजेपछि घरबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
ठमेलको एउटा होटलमा स्कूटीकै चाहनामा पहिलो पटक परपुरूषलाई मेरो शरीर सुम्पिएँ
त्यहाँ दुई जना मानिसहरू थिए । हेर्दा अत्यन्त धनीमानी जस्ता देखिने ति मानिसहरूलाई देख्ने वित्तिकै मोनिकाले हात हल्लाई । तत्तकालै उनीहरूले हामीलाई आफ्नै कारमा राखेर ठमेलको एउटा होटलमा पुर्याए । होटलमा मलाई खानेकुरा अर्डर गरेर उनीहरू एकछिन् वेपत्ता भए । त्यहाँ उनीहरू करिव ३० मिनेट हराए । ३० मिनेट पछि मोनिका मात्र आई उनीहरू आएनन् । मोनिकाले मलाई यस्तो प्रस्ताव राखी त्यो सुन्दा म सुरूमा त छाँगोबाट खसेको जस्तै भएँ । पछि मलाई मोनिकाले सम्झाई र आफू पनि करिव तीन महिना अघि देखिनै त्यस्तो काममा लागिसकेको बताई । त्यो सुन्दा मलाई झन् विश्वास मान्न गाह्रो भयो ।
पछि उसले कसैले थाहा नपाउने र तिम्रो स्कूटी किन्ने चाहना पनि पुरा हुने बताएपछि म उसको कुरामा राजी भएँ । भोलि त्यही ठाउँमा भेट्ने भन्दै म उबाट छुट्टिएर आफ्नो घरमा आएँ । घरमा आउँदा पनि हलुका भएको थिएन । मथिङ्गलमा के–के कुरा आइ रहे । एक मनले सोच्थ्यो, धत् त्यस्तो काम पनि गर्छन्, अर्को मनले भन्थ्यो मोनिकालाई हेर ऊ अरू भन्दा कति भिन्न छे, उसको लवाई खवाई र भड्किलो खर्च गराईको कसले मात्र तारिफ गर्दैन ? अर्को मनले नै जित्यो । त्यसपछि मैले घरमा जागिर मिलेको र भोलिबाट काममा जानुपर्ने भनेर ढाँटे । परिवारले पनि कहाँ काम मिल्यो, काम कस्तो, खासै सोधिखोजि गरेनन् । त्यसपछि म झनै फुक्का भए । भोलिपल्ट हामी उनीहरूले भनेकै ठाउँमा पुग्यौँ । त्यहाँ हिजै भेटेका मानिसहरू थिए ।
यसरी ठमेलको एउटा होटलमा मैले स्कूटीकै चाहनामा पहिलो पटक शरीर परपुरूषलाई सुम्पिएँ । जवानी विसाएँ । कुमारित्व तोडेँ । उनीहरूले त्यस्तै २० हजार दिए । तर, मेरो हातमा १० हजार मात्र पर्यो आधा पैसा मोनिकाले नै लिई । अहिले सम्झँदा पनि निकै रुन लाग्छ । मन भक्कानिएर आउँछ । त्यो वाध्यता थियो या रहर मैले केही सोच्न सकेको छैन । त्यस दिन म राति अवेर घर पुगेको थिएँ, मन बेचैन बनाएर । परिवारले कामको पहिलो दिन भनेर खासै वास्ता गरेनन् । त्यसपछि मेरे दैनिकीमा एकाएक परिवर्तन आयो । घरमा ट्राभल अफिसमा काम गर्ने, ठमेलमा कार्यालय रहेको भनेर ढाँटेकी थिएँ । त्यसैले ठमेल तिर कसैले देख्दा मलाई आपत्ति हुँदैनथ्यो । बुबाको सरकारी जागिर, दाजु उपत्यका बाहिर र आमा घरमै व्यस्त हुने हुनाले ममाथि निगरानी राख्ने कोही थिएन ।
म विहानै कलेज जान्थे र हप्तामा एक दिन त्यस्तो ग्राहककोमा जान्थेँ । साथी मोनिका नै थिई । ग्राहक खोज्ने काम मोनिकाकै थियो । केही पुराना केही नयाँ तर एकदम पैसापाल थिए हाम्रा ग्राहक । कति त रातै विताऔँ भन्दथे तर पनि घरपरिवारले थाहा पाउने भयले म रातै चाँही विताउन्न थिएँ । मोनिका भने धेरै जसो ग्राहकसँग रातै विताउँथी । म हप्ताको सात देखि १० हजार सम्म कमाउने थालिसकेको थिएँ । त्यस्तैमा ११ को बोर्ड एक्जाम पनि दिएँ । परीक्षा राम्रो हुने कुरै भएन । त्यसको दुई महिना पछि स्कूटी पनि किनेँ । जीवनको महत्वपूर्ण चाह त पुरा भयो तर म अर्कै दलदलमा फसिसकेको थिएँ । कक्षा ११को परीक्षामा राम्रो नतिजा आएन, तर फेलै पनि भइनँ । काम गर्न थालेकोले बिग्रियो होला भनेर परिवारले पनि खासै चिन्ता लिएनन् । र, म नचाँहदा नँचाहदै त्यस्तो दलदलमा फस्न पुगेँ ।
पत्याउनै गाह्रोदुईवटा पिल्लरमा टिकेको विश्वको सबैभन्दा सानो देश, जुन देशमा बस्छन् २७ जना मानिस
खेतको कुनामा भेटियो रहस्यमय डल्लो, जाँच गर्दा सबै भए चकित (फोटो र भिडियो सहित)
एजेन्सी । बेला बेला आश्चर्यजनक समाचारहरु आउने गर्दछन । विश्वमा कुनै यस्ता रहस्य हुन्छन् जो अचानक नजिक आउने गर्छन्। जुन चिज रहस्यमय तथा ऐतिहासिक समेत हुने गर्दछन्।
यस्तै भयो दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिनास्थित एनटोनिया निवासमा पनि । उक्त घर नजिकै एलियनको अड्डा भेटिएको दाबी गरिएको छ। एलियनलाई दोस्रो ग्रहको जीवका रुपमा लिइन्छ। निएभास नाम गरिएको एक व्यक्तिको बुएनोस एरेस नजिककै कार्लोस स्पेगजिनी भन्ने ठाउमा फार्म थियो। एक दिन आफ्नै फार्मको नजिकै हिँडदै गर्दा उनका आँखा खेतमा भएको अनौँठो बस्तुमा ठोक्कियो। उक्त बस्तु अड्डाको आकारको थियो। जुन माटोले पुरिएको थियो।
त्यसपछि अनुसन्धान कर्तालाई बोलाएर उक्त बस्तुको जाँच गर्दा रहस्य बाहिरीयो। उक्त बस्तु डायनोसर नभएर यलियनको अड्डा भएको पुष्टी भयो। एक्सपटेर्सको अनुसन्धानले उक्त बस्तु एक प्राचिन जीव भएको तथा जसको नाम ग्लिप्टोडोँ रहेको पत्ता लाग्यो। जो १० हजार वर्ष पहिले साउथ अमेरिकामा पाइने गर्थे ।
भिडियो पनि हेर्नुहोस :